Uyiphucula njani i-WiFi yakho etshintsha itshaneli yeRouter | IPhone iindaba
Uyiphucula njani i-WiFi yakho ngokutshintsha ijelo leRouter
Iindaba ze-IPad | | iPhone, Izifundo kunye neencwadana
Unonxibelelwano lwe-fiber ye-300Mbps, ikhompyuter ye-state-of-the-art kunye ne-router entle eneemitha ezi-3 ukusuka kwikhompyuter yakho, kodwa nangona kunjalo i-intanethi icotha kakhulu. Ukufowunela umsebenzisi, igcisa elikutyelelayo ekhaya ukujonga unxibelelwano kunye nayo yonke into ihamba ngokugqibeleleyo, nangona kunjalo uqhagamshelo lwakho lwe-WiFi luyabulala, hayi kwikhompyuter yakho kuphela, kodwa nakwi-iPad yakho, kwi-iPhone yakho, njl. Ngaphambi kokuba uphambane kwaye uchithe i-euro encinci ukutshintsha i-router, ngaba ukhe wajonga ukuba ijelo elisasaza elona lifanelekileyo? Ukugcwala kwenethiwekhi kwindawo yakho kubangela uphazamiseko ukuba lonakalise olona nxibelelwano lufanelekileyo lwe-intanethi, kwaye isisombululo silula Kwaye awudingi nasiphi na isicelo sentlawulo kuba i-OS X ikunika izixhobo eziyimfuneko. Sichaza indlela yokusombulula iingxaki zakho kwaye ukhethe elona jelo lifanelekileyo ukuze unxibelelwano lwakho lube lolona lufanelekileyo.
Ukuba uhlala kwibhloko yeeflethi ezinjengam, uluhlu lweenethiwekhi ezikhoyo ze-WiFi zinokuze zibe zezam, okanye zide. Oku kuthetha ukuba ikhompyuter yakho ifumana ukuphazamiseka okungathethekiyo okwenza ukuba inethiwekhi yakho ingafunyanwa ngomgangatho owaneleyo. Ukuba i-router yakho iyayivumela, unokukhetha ibhendi ye-5GHz enokuphazamiseka okuncinci, kodwa sele iqala ukwanda kwaye ayisiyo "njengecocekileyo" njengangaphambili. Ukukhetha itshaneli yasimahla (okanye ubuncinci engonelanga) lolona khetho lufanelekileyo lokuphucula nangoko unxibelelwano lwakho lwe-intanethi. Ukwenza oku, siza kuvula i-OS X ye-Wireless Diagnostic application, esiyifezekisayo ngokucinezela iqhosha le- «Alt» kwi-Mac yethu ngelixa sicofa kwi icon ye-WiFi.
Njengoko ubona, ulwazi olunikwa yi-OS X xa usenza le nto lukhulu kakhulu kwaye unokukhetha «Uxilongo olungenantambo oluVulekileyo». Sinqakraza kolo khetho kwaye silinde.
Iwindow iya kuvela apho asizukuhlawula nganto. Kwibar ephezulu, cofa ku «Window> Jonga» kwaye ifestile ebonakalayo yile ekufuneka siyikhathalele.
Kukho zonke iinethiwekhi zeWiFi esinazo eminwe yethu, kodwa okona kubaluleke kakhulu, Kwikholamu yasekhohlo isibonisa iindlela ezifanelekileyo zokusebenzisa ibhendi ye-2,4GHz kunye ne-5GHz. Ezo zezona zinokuphazamiseka okuncinci kwaye ke ezo kufuneka sizikhethe kwi-router yethu. Ngoku kufuneka singene kuphela kwisimo se-router kwaye sibakhethe ukuze yonke into isebenze njengoko kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Uyiphucula njani i-WiFi yakho ngokutshintsha ijelo leRouter
Steve Wozniak: "Asinakumthemba uRhulumente"
I-Facebook iyayandisa inkonzo yayo yokusasaza ividiyo eYurophu